အဖြူရောင် စည်းတံတားတွေ ကျော်လွှား
အတုန့်အလှည့် ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ
အေးအတူ ပူအမျှ ခံစား
ငါတို့က တယောက်ကို တယောက်
ဝေးကွာခြင်း ဆိုတာ အနိစ္စ
အတွေးမှာပင် မဝေးခဲ့ ကြတာမို့
Posted by soe pae at Tuesday, August 07, 2012 1 comment:
ဒီကောင်လေးကတော့ Viber for pc software လေးဖြစ်ပါတယ်--- မိမိတို့ ၇ဲ့ စက်ကနေပြီးတော့ ဖုန်းကို ခော်ဆို ၇န် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်----- ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုမယ်ဆို၇င် အ၇င်ဆုံးသိထား၇မှာ ကတော့ မိမိတို့ ဆက်သွယ်ချင်တဲ့သူဆီမှာ viber ၇ှိ၇မှာဖြစ်ပါတယ်(နက်ချိတ်ပြီး)။ အ၇င်ဆုံး မိမိတို့ ၇ဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ အောက်က software လေးကို run ရ မှာဖြစ်ပါတယ်--- ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းကိုခော်ဆိုနိုင်လို့ ရတဲ့အပြင် pc to pc လဲ ခော်ဆိုလို့ ၇ပါတယ်--- ကျွန်တော့်လို ဖုန်းမကိုင်နိုင်တဲ့ သူအတွက်တော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ ---- free call ခော်ဆို၇တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်တွင်း ကော ပြည်ပ ကော ပိုက်ပိုက် ကုန်တော့ ဘူးပေ့ါဗျာ---- message ထဲကနေလဲ ပုံတွေပါ ပိုလို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ----အဓိက က နက်ချိတ်ဆက် ထားဖို့ နဲ့လိုင်းလေး ကောင်း၇င် ကို အဆင်ပြေပါတယ် ခင်ဗျာ---
လိုချင်တဲ့ သူများ အောက်က လင့်လေးကနေ download ယူလိုက်ပါ--
< download software >
လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်-----
အ၇င်ဆုံး software လေးကို ကလစ်နစ်ချက်ပေးပြီး run လိုက်ပါ--- အောက်က ပုံလေးအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်--- (continue) ကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ--
ပြီး၇င် Install ကို ကလစ်ပေးပါ----
အောက်က ပုံလေး အတိုင်း install လုပ်ပါလိမ့်မယ်-----
Install လုပ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ အောက်က ပုံလေး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်---- (app search) ကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ------
search box လေးထဲမှာ viber လို့ ၇ိုက်ထည့်ပါ---ပြီး၇င် enter ခေါက်လိုက်ပါ---
အောက်က လိုမျိုး viber free call လေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ---
ပြီး၇င်တော့ အောက်က ပုံလေး အတိုင်းသူဘာသာ install လုပ်ပါတယ်---- ပြီးတဲ့ အခါ back arrow key ပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ-----
အောက်က လိုမျိုး home မှာ viber လေး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်--- ပြီး၇င်တော့ အဲကောင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ-----
အပေါ်က အဆင့်တွေ အကုန်ပြီးသွားပြီဆို၇င်တော့ Viber လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး အတိုင်းဆက်ပြီးလုပ်၇မှာ ဖြစ်ပါတယ်---- ဖုန်းနံပါတစ်ခုဖြည့်၇ပါတယ်--- ပြီး၇င် မိမိတို့ ၇ဲ့viber code ကို အဲဖုန်းကို မတ်စေ့ပိုပါလိမ့်မယ့်----- ဖုန်းဆိုတဲ့ နေ၇ာမှာ မိမိတို့ ဖြည့်တဲ့ ဖုန်းဟာ နက်ချိတ်ဆက်ထားဖိုလဲ မလိုပါဘူး--- viber အကောင့်မဖောက်၇သေးတဲ့ ဖုန်းဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ် --ဘာလိုလဲဆိုတော့ တခြားသူက မိမိကို viber ခော်မယ်ဆို၇င် မိမိဖြည့်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ခော်ဆို၇မှာဖြစ်ပါတယ်---- အဲ့ချိန်မှာ မိမိတို့ ၇ဲ့ ဖုန်းကို viber call က မ၀င်ပါဘူး -- အဲဖုန်းနံပါတ်နဲ့ သုံးထားတဲ့ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာက viber ကို ၀င်မှာဖြစ်ပါတယ်----
အားလုံးပြီ ပြီ ဆို၇င်တော့ အပေါ်က ပုံလေး အတိုင်း viber free call ခော်ဆိုလို့ ၇ပြီ ဖြစ်ပါတယ်------
Posted by soe pae at Saturday, August 04, 2012 10 comments:
Posted by soe pae at Wednesday, July 18, 20122comments:
နှလုံးသားတစုံ အတူရှိနေရင် ပြည်စုံခဲ့ပြီနော်...
မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာတချို့နဲ့ မပြောနိုင်သေးတဲ့
စကားလေးတွေကို ဒိုင်ယာရီရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြရင်း
အတူပြန်ဆုံမယ့်နေ့ကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ဆဲပါ...။
လမင်းကြီးက တိမ်တွေကြားမှာ မှေးခို အိပ်စက်နေတယ်ထင်ပါရဲ့...
အခန်းကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ မှိန်ပြပြ မီးလုံးလေးတွေရဲ့အောက်မှာ
ချစ်သူကို သိပ်ချစ်တဲ့အကြောင်း ကဗျာတွေ သီရင်းနဲ့ပေါ့...။
ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ မနေ့က အချိန်တွေနဲ့ ၊ ကြည်နူးခဲ့ကြတဲ့
မနက်က အကြောင်းတွေကို ပြန်တွေးမိတိုင်း
အိပ်ရာထက်မှာ လူးလွန့်ရင်း ငါ့ရင်ခုန်သံတွေ ခုထိ ငါပြန်ကြားနေရတုန်းပဲလေ....။
နောက်ဆုံး ငါသိခဲ့တဲ့ငါ့ကိုယ်ငါနဲ့..ငါရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေရဲ့အကြောင်းကလဲ
Posted by soe pae at Tuesday, July 03, 20122comments:
စကားကြီး (၁၀) မျိုး နှင့် စကားပြောနည်း(၁၅)မျိုး
လိုရာဆိပ်ကမ်းကို ရေညာကတင်၍ကူးမှရောက် သကဲ့သို့
”မိမိလိုရာရောက်အောင်ကြိုတင်၍ စကားပိုဖြင့် ပြောဆိုခြင်း။”
ကောက်ပင်ကို လက်တဖက်ဖြင့် မြဲမြံ
”သူဆိုသောစကား မိအောင်ဖမ်းကိုင်ပြီးမှ ပြတ်စဲအောင်ပြောဆိုခြင်း။”
လိုအင်ဆန္ဒ ရှိသမျှသောအရာဝတ္ထုတို့ကိုဖေါင်တွင် တင်၍ဖြည်းညှင်းစွာ ဆန်တက်သွားလျှင် လိုအင်ကိစ္စပြီးသကဲ့သို့
”ခြေသိမ်း ခေါင်းပိုက်ပမာ ဟပ်စပ်၍ ပြီးပြတ်အောင်ပြောဆိုခြင်း။”
အိုးနှင့်ဆန် တန်ရုံထည့်၍ချက်လျှင် ကောင်းစွာ ကျက်နပ် သကဲ့သို့
ကျည်ပွေ့ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ဆီပွတ်လျှင် ဆီထွက်၍ မိမိအလိုကိစ္စပြီးသကဲ့သို့
ဆင်ထိုးဝှေ့မည်လိုက်လျှင် တိမ်းရှောင်ဖယ်သွေ လွတ်ရာ၌ ပြေးလွှဲကာနေရသကဲ့သို့
တောင်သူလယ်သမားတို့သည်မိမိတို့တည်ခုတ်မည့်လယ်ယာမြေကွက်၌ရှေးဦးစွာခြုံပိတ်ပေါင်းနွယ် သစ်ပင်ငယ် တို့ကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးမှသာ သစ်ပင်ကြီးတို့ကို ခုတ်ထွင်ဖိလှဲသကဲ့သို့
”စကားငယ်ကို ပြောဆိုပြီးမှ စကားကြီးကို ဖိစီး၍ ပြောဆိုခြင်း။”
(၈) ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပစ်စကား-
ကြက်ခွပ်ရာ၌ နောက်ဆုတ်ဟန်ပြု၍ခွပ်မှသာ ခွပ်ပစ်သကဲ့သို့
”သူ့စကားအလိုသို့ လိုက်တန်ကလိုက်၍ စီးသာမှစီးလျက် ပြီးပြတ်အောင် ပြောဆိုခြင်း။”
(၁ဝ) ခက်တင် မောင်းနင်းစကား-
”ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မတင်မကျ ပြောဆိုခြင်း။”
စကားပြောနည်း ၁၅ နည်း
၁ ။ အလောတကြီးကိစ္စ~ဖြေးဖြေးပြောပါ ။
၂ ။ အရေးတကြီးကိစ္စ~ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ ။
၃ ။ အရေးမကြီးသည့်ကိစ္စ~ဟာသနှော၍ပြောပါ ။
၄ ။ မပိုင်နိုင်သောကိစ္စ~ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ပြောပါ ။
၅ ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကိစ္စ~ ကာလံဒေသံကိုက်၍ပြောပါ ။
၆ ။ မပျော်ရွှင်ဖွယ်ကိစ္စ~ပြောသင့်သူမှပြောပါ ။
၇ ။ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကိစ္စ~လူတွေ့ တိုင်းမပြောပါနဲ့။
၈ ။ သူတစ်ပါးကိစ္စ~သတိထားပြီးပြောပါ ။
၉ ။ မဖြစ်ပျက်သေးသည့်ကိစ္စ ~လက်လွတ်စပယ်မပြောပါနဲ့ ။
၁၀ ။ မလုပ်နိုင်သောကိစ္စ~ကြွားဝါမပြောပါနဲ့။
၁၁ ။ သူတစ်ပါးထိခိုက်မည့်ကိစ္စ~လုံးဝမပြောရ ။
၁၂ ။ လင်မယားကိစ္စ~တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြောပါ ။
၁၃ ။ ကလေးများကိစ္စ~လမ်းကြောင်းညွှန်၍ေ ပြာပါ ။
၁၄ ။ မိမိ၏ကိစ္စ~သူများမည်သို့ပြောသည်ကိုနားထောင်ပါ ။
၁၅ ။ သက်ကြီးဝါကြီးသူနှင့်ပြောလျှင်~များများနားထောင် နည်းနည်းပြောပါ။
ဖတ်ခဲ့ဖူးသမျှလေးတွေ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းပါ....
Posted by soe pae at Monday, July 02, 2012 No comments:
ငါ နင့်ကို သိပ်ချစ်တာပဲ...။
နင်ဖန်ဆင်းတဲ့ စီးချက်တွေ ဖြစ်နေခဲ့လို့လေ..။
အခုလို ဝေးကွာ ခြင်းက
ဆုံဆည်း ခြင်းရဲ့ ခြေလှမ်း အစပဲမို့လား...။
နင်နဲ့ဆုံနိုင်ဖို့ တခု တည်းပါဟာ..။
/ \_ ♥♥.... ငဖြိုး
Posted by soe pae at Sunday, July 01, 2012 No comments:
လတိုင်းလတိုင်း 14 ရက်နေ့၏ထူးခြားချက်များ
1. January 14th "Diary Day"
2. February 14th "Valentine Day"
3. March 14th "White Day"
4. April 14th " Black Day"
ကျနော်တို့လို ချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေနေ့ပေ့ါ (ငဖြိုးနေ့ပေါ့) ဟိဟိကြော်ငြာတာ...။
5. May 14th "Rose Day"
6. June 14th "Kiss Day"
7. July 14th "Silver Day"
8. August 14th ""Green Day"
9. September 14th "Photo Day"
10. October 14th "Wine Day"
11. November 14th "Movie Day"
12. December 14th "Hug Day"
Posted by soe pae at Saturday, June 30, 2012 No comments:
Honest Hacking guide book
ကျွန်တော်ခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်လေး ကတော့ honest hacker guide စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်----- hacker ဆိုလို့black hacking တော့ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ---- ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာနည်းပညာ များကို ထိုးထွင်းလေ့လာဖို့ အတွက် လမ်းညွန်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်---- နာမည်မကြီး အသုံးနည်းတဲ့ အသုံးဝင် program တွေကိုလည်း installation ထည့်သွင်းပုံမှ အစ ၇ှင်းပြပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ--
လိုချင်တဲ့ သယ်ချင်းများ အောက်က download လင့်လေး ကနေယူသွားလိုက်ပါ----
မေမေ ....သို့ (၂)
အချိန်တိုင်းတွေ့ချင်နေတာ အချစ် လို့ခေါ်ရမလား
နှုတ်ခမ်းတစုံမှ ထွက်ကျလာတဲ့ သံစဉ်တချို့နဲ့
ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေ အောက်မှာ
သား နှလုံးသားတွေ အလုပ်များခဲ့ဖူးတယ်
အဲဒီနေ့တွေ သားကြည်နူးခဲ့ဖူးတယ် မေမေ...။
အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိတဲ့ ကျနော့် အပြစ်လား
ကျွန်းခံနေတဲ့ နှလုံးသားတွေ ကြောင့်လား
ဂုဏ်ဓနဆိုတဲ့ သူတို့ ခုံမင်တဲ့အရာတွေကြောင့်လား
ပြဒါး မသုတ်ထားတဲ့ မှန်တချပ်က
ကျနော်အတွက် မေတ္တာတွေ ရောင် ပြန် မဟပ်ခဲ့ပါဘူး
ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး မေမေ....။
နောက်ဆုံး သား နားလည်လိုက်တာက
ငွေ ဆိုတာကြီးက မီးမောင်းထိုးပြနေတယ်လေ
သား နေတတ်အောင် ကြိုးစားနေတယ် မေမေ...။
မေတ္တာတွေ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ မေမေ့ရင်ခွင်လောက်
ဘယ်နေရာမှ မအေးမြ ခဲ့ပါဘူး
သား မေမေ့ဆီကိုပြန်လာချင်တယ် မေမေ...။
ဒီနေ့ သားတို့ မိသားစုပုံလေးကို ပြန်ကြည့်မိတယ်
ဖေဖေရယ် မေမေရယ် သားရယ် ညီမလေးရယ်
ပြန်မရတော့တဲ့ အတိတ်က အချိန်တခုရယ်ပေါ့
ဖြစ်နိုင်ရင် မိသားစုတွေစုံတဲ့ ထမင်းပွဲလေး
တခါလောက်တော့ လက်ဆုံစားချင်တယ် မေမေ...။
ဆောင်းရက်တွေကို လည်း လွမ်းတယ်
မငိုရဘူး မဆွေးရဘူးဆိုတဲ့ မင်းခယောက်ျားတစ်ယောက်မို့
တမ်းတ သတိရစိတ်တွေနဲ့ ခပ်ကြာကြာလေးတော့
Posted by soe pae at Friday, June 29, 2012 No comments:
ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ (သက်တန့်ချို)
အရမ်းကိုချမ်းသာတဲ့ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးဆီမှာ ဇနီးလေးယောက်ရှိပါတယ် ။ ကုန်သည်ကြီးက စတုထ္ထမြောက်ဇနီးကိုအချစ်ဆုံးပဲ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ဝတ်ရုံကို ဆင်မြန်းစေပြီး သိမ်မွေ့နူးညံ့စွာ ပဲဆက်ဆံတယ် ။ ကုန်သည်ကြီးက ဒီ ၄ ယောက်မြောက်ဇနီးကို အရမ်းဂရုစိုက်ပြီး ဘာမှတော့မပေးဘူး ဒါပေမယ့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း အကောင်းဆုံးကိုပေးလေ့ရှိတယ် ။
ကုန်သည်ကြီးဟာ တတိယမြောက်ဇနီးကိုလည်း လွန်စွာ ချစ်မြတ်နိုးတယ် ။ သူမကို ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းအတွက်အမဲဂုဏ်ယူလေ့ရှိပြီး သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း တတိယမြောက်ဇနီးလေးကိုကြွားလေ့ရှိတယ် ။ ကုန်သည်ကြီးက ဒီဇနီးလေး တခြားယောင်္ကျားတွေနဲ့ ထွက်ပြေးသွားမှာကိုလည်း အရမ်းကြောက်လန့်နေခဲ့တယ် ။
ဒါ့အပြင်ကုန်သည်ကြီးဟာ ဒုတိယမြောက်ဇနီးကိုလည်း ချစ်မြတ်နိုးပါတယ် ။ သူမဟာ အရ်ကိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ် စိတ်လည်းရှည်ပြီး ကုန်သည်ကြီးရဲ့ လူယုံတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ကုန်သည်ကြီးအနေနဲ့ ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင် ဒုတိယဇနီးဆီကိုသွားပြီး အကူအညီတောင်းခံလေ့ရှိတယ် ။ ဒုတိယဇနီးက ကုန်သည်ကြီးကို ကူညီပြီး ပြဿနာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးလေ့ရှိတယ် ။
ကုန်သည်ကြီးရဲ့ ပထမဆုံးဇနီးကတော့ တော်ဝင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပြီး ကုန်သည်ကြီးရဲ့ ဥစ္စာဓနတွေနဲ့အိမ်ကြီးကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကုန်သည်ကြီးက ပထမဇနီးကိုတော့မချစ်ပါဘူး ။ သူမက သူ့ကို နက်ရှိုင်းစွာ ချစ်ပေမယ့်လည်း ကုန်သည်ကြီးကတော့ အမြဲပဲ ဆူညံစွာ ကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံလေ့ရှိတယ် ။
တစ်နေ့မှာ ကုန်သည်ကြီးနေမကောင်းဖြစ်တယ် ။ နေမကောင်းတာဟာ တဖြည်းဖြည်း အဲဒီရက်ကစလို့ ရှည်ကြာလာတယ် ။ မကြာခင်သူသေဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်း သူ့ကိုယ်သူသိနေခဲ့တယ် ။ ကုန်သည်ကြီးက သူ့ဘ၀သူပြန်စဉ်းစားပြီး တွေးနေတယ် ။ “ ငါ့မှာ ငါနဲ့အတူနေတဲ့ဇနီးလေးယောက်ရှိတယ် ဒါပေမယ့် ငါသေတဲ့အခါ ငါတစ်ယောက်တည်းနေရတော့မယ် ဘယ်လောက်တောင် အထီးကျန်လိုက်သလဲ !! ”
ဒါကြောင့် သူက စတုထ္ထမြောက်ဇနီးကိုမေးတယ် ။ “ ငါမင်းကိုအချစ်ဆုံးပါပဲ မင်းကို အသစ်လွင်ဆုံးအ၀တ်အစားတွေပေးဝတ်ခဲ့တယ် အထူးပဲကြင်နာဂရုစိုက်ခဲ့တယ် အခုငါ သေရတော့မယ် မင်းငါနဲ့တမလွန်ကို အတူအဖော်အဖြစ် လိုက်ခဲ့နိုင်မလား ” “ ဟင့်အင်း ” စတုထ္ထမြောက်ဇနီးက တစ်ခွန်းထဲဖြေပြီး ဘာစကားမှမပြောတော့ပဲလှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ် ။
သူမအဖြေက ကုန်သည်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကို ဓါးနဲ့လှီးခွဲလိုက်သလို နာကျင်ခဲ့ရတယ် ။ ၀မ်းနည်းသွားတဲ့ကုန်သည်ကြီးက တတိယဇနီးကိုမေးတယ် ။ “ ဇနီးအားလုံးထဲမှာ ငါမင်းကိုအချစ်ခဲ့ဆုံးပါပဲ အခုငါသေတော့မယ် မင်းငါနဲ့အတူ အဖော်အဖြစ်တမလွန်ကို လိုက်ခဲ့နိုင်မလား ” တတိယဇနီးကပြန်ဖြေတယ် “ ဒီမှာနေရတဲ့ဘ၀ကပိုကောင်းပါတယ် ရှင်သေသွားပြီးရင်ကျွန်မမှာ နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ရှိသေးတယ် ” အဖြေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါ ကုန်သည်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားဟာ နာကျင်သွားပြီးအေးစက်သွားတယ် ။
ပြီးတော့ ဒုတိယဇနီးကိုသူဆက်မေးတယ် ။ “ ငါအကူအညီလိုတဲ့အခါတိုင်းမင်းဆီကိုလာခဲ့တယ် မင်းဟာ အမြဲငါ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ် အခု ငါသေရတော့မယ် မင်းငါနဲ့အတူ အဖော်အဖြစ်တမလွန်ကို လိုက်ခဲ့နိုင်မလားဟင် ” “ စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင် ဒီတစ်ကြိမ်တော့ကျွန်မရှင့်ကို မကူညီနိုင်တော့ပါဘူး အလွန်ဆုံးရှင့်ကို စိတ်အားတက်အောင်ပဲ ကျွန်မကူညီပေးနိုင်ပါ့မယ် ” အဖြေစကားက မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုပါပဲ ကုန်သည်ကြီးဟာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားခဲ့တယ် ပြီးအစာရေစာလည်းမ၀င်တော့ဘူး ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အသံတစ်သံထွက်လာတယ် ။ “ ကျွန်မရှင်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့မယ် ရှင်ဘယ်ကိုသွားသွားဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မရှင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ့မယ် ”ကုန်သည်ကြီးက လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဇနီးဖြစ်လို့နေတယ် ။ သူမက ကလည်းပိန်ကပ်နေတယ် အစာရေစာချို့တဲ့နေသလိုပါပဲ ။ အံသြစွာနဲ့ကုန်သည်ကြီးကပြောခဲ့တယ် ။ “ ငါအသက်ရှင်စဉ်မှာ မင်းကို ငါ ဒီထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်သွားတော့မယ် ”
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေမှာ ဇနီးလေးယောက်စီရှိပါတယ် ။
၁ ။ စတုထ္ထဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါ ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုပဲကောင်းအောင်လှအောင် တောက်ပနေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးနေပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့သေဆုံးတဲ့အခါစွန့်ခွာခဲ့ရမှာပါပဲ ။
၂ ။ တတိယဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းစိမ်တွေပါ ။ ကျွန်တော်တို့သေတဲ့အခါ အဲဒီစည်းစိမ်တွေကလည်းတခြားလူတွေနဲ့အတူပါသွားလိမ့်မယ် ။
၃ ။ ဒုတိယဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲရင်းနှီးတယ်ပြောပြော ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေစဉ်မှာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ သူတို့က အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ ရဲရင့်အောင် စိတ်အားတက်ကြွအောင်ပဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
၄ ။ ပထမဆုံးဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အတွင်းသဏ္ဍန်ပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့တကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ့ အရာဝထ္ထုပစ္စည်းစည်းစိမ်တွေ နဲ့ အာရုံငါးပါးနောက်ကျွန်တော်တို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ပြီး စိတ်ရင်းသဏ္ဍန်ကို လစ်လျှူရှုထားပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွင်းသဏ္ဍာန်ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲအတူရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားသွားဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အတူလိုက်ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by soe pae at Thursday, June 28, 2012 No comments:
မေမေ ....သို့ (၁)
ကျနော့် မေမေနေကောင်းပါစေ နော်...။
အမှန်နဲ့ အမှားကို မြင်တတ်အောင်ကြည့်ရင်း
ညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ အဖြေတခု ကိုက်ညီဖို့
ဘ၀ဆိုတဲ့ လောကဇတ်ခုံကြီးက အခက်သားနော်
ကံစီမံရာ ကြိုးဆွဲမှု့တွေ အောက်မှာ
ငြိမ်သတ်လာလိုက် ပုတ်ခတ်မှု့တွေ ရှိလိုက်မို့
သား တောင် တော်တော် ကျင့်သားရနေပြီ မေမေ...။
တခါတလေ သားက မေမေစကားတွေ မျက်ကွယ်ပြုဖူးတယ်
လူတိုင်းတွေ့ကြုံနေကြ ၀မ်းသာမှု့ ၀မ်းနည်းမှု့ဆိုတဲ့
မညီမျှတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ အောက်မှာ
ဒီအတွက် သားကိုခွင့်လွှတ်ပါ မေမေ...။
တကယ်ဆိုရင် သား ရင့်ကျက်မှု့တွေ မရှိသေးဘူး
ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ ပြသနာတခု ကြုံလာတိုင်း
မေမေသာ အနားမှာရှိရင်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေက
သားကို ရင့်ကျက်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာ ပမာပြနေတာလေ..
သား ဒီထက် ကြိုးစားပါ့မယ် မေမေ...။
အသိနဲ့ သတိဆိုတဲ့ ထိန်းချုပ်မှု့အောက်မှာ
ဘ၀နဲ့ ဆန္ဒ ဆိုတာကို
ချိန်ခွင် လျှာ ညိုနေရတယ်
အကောင်းဆုံး ကြိုးစား မှု့တွေနောက်မှာ
မနက်ဖြန်တိုင်းအတွက် ပြင်ဆင်နေတယ် မေမေ...။
PS: အမေ...သို့ (၂) ဆက်ပါဦးမည်....
အတိတ်ကဆိုတဲ့ ခပ်ရေးရေးဇတ်လမ်းတွေ ရှိခဲ့တယ်...။
ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့ မနေ့ကအကြောင်းတွေ ရှိဖူးတယ်...။
နှလုံးသား တစုံရဲ့ တိုးရှရှ စကားပြောသံ တချို့တွေရှိကြတယ်....။
အဆိုးဆုံးနေ့ရက်တွေထိ ခိုင်မြဲတဲ့ တွဲလက်တွေ ရှိနေဖို့လိုတယ်...။
အချစ်ဆိုတဲ့လမ်းမှာ ပျော်ရွှင်မှု့တွေ ရှိနေသလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့
အဆိုးဆုံးနေ့ရက်တွေထိ ခိုင်မြဲတဲ့ တွဲလက်တွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်....။
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေး ကတော့ မြန်မာဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ဘယ်လို ဖန်တီး၇တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်----- ဘလော့တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် မလုပ် တတ်သေး တဲ့ သယ်ချင်းများ အတွက် ၇ည်၇ွယ်ပြီး ဒီစာအုပ်လေး ကို တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်---- ဘလော့ လေး မလုပ်ခင်မှာ အ၇င်ဆုံးလို အပ်တာကတော့ အကောင့် တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်--- ပြုလုပ် ပုံလေးတွေကို တော့ အောက်က စာအုပ်လေးထဲ မှာ ရေးသားထားပါတယ် ခင်ဗျာ------
လိုချင်တဲ့ သူများ အောက်က download လင့်လေး ကနေယူသွား လိုက်ပါ----
Posted by soe pae at Tuesday, June 26, 2012 1 comment:
DDR2 နဲ့ DDR3 ကွာခြားချက်များ
ကျွန်တော်တို့ အတိုကောက် ခေါ်ကြတဲ့ RAM ဆိုတာ Random Access Memory ဆိုတာတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ရင်းနှီးထိစပ်နေသူ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်။ အတိုကောက် ပြောကြရင် တော့ Memory ပေါ့။။ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးဟာ RAM မရှိရင် ဖြစ်ဖြစ် OS ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ပြည့်မှီအောင် RAM မထည့်သွင်းထားနိုင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် စက်က အရမ်းနှေးကွေး လေးလံပြီး လိုလားချက်ပြည့်စုံနိုင်ဖို့ အချိန် အရမ်းပေး ရတတ်ပါတယ်။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေက အရင်တုန်းက ကွန်ပြူတာ အဟောင်းတွေ မှာ တော်တော် များများ တွေ့ရ တတ်ပြီး အဲလို ဖြစ်လာရင် သင့်တော်တဲ့ Speed ရအောင် RAM ထပ်တိုးရတာတွေ တစ်ခြား Upgrade လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း RAM ထပ်တိုးတယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ ရိုးရိုး ပမာဏ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုပါ - သူ့နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ သိထားသင့်တာတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ RAM မှာမှ Versions တွေ အမျိုးမျိုး ရှိသလို - Speeds တွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိပြီး ကွာခြားချက်တွေလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် DDR2 800 RAM နဲ့ 2GB stick တစ်ခုဟာ DDR3 1333 RAM နဲ့ 2GB stick ကို ယှဉ်လိုက်ရင် 2GB ချင်း ပမာဏ တူပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်ချင်း မတူပါဘူး RAM အမျိုးအစား မတူတာနဲ့ ဘာတွေများ ကွဲသွားသေးတာလဲ - ဒါတွေက ကွန်ပြူတာ သမားပဲ ဖြစ်စေ - ရိုးရိုး ကွန်ပြူတာ သုံးသူ တစ်ယောက် ဖြစ်စေ နားလည်ထားဖို့ သင့်ပါတယ်။
Posted by soe pae at Saturday, June 23, 2012 No comments:
ဒီကောင်လေး ကတော့ Windows7Installation Guide စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်------ ကွန်ပျူတာနဲ့ အကျွမ်းတ၀င် မ၇ှိကြတဲ့ သယ်ချင်းများအနေနဲ့မိမိတို့ ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဘယ်လို window အသစ်တင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်-----အဲဒီအခါ သယ်ချင်းများ အတွက် ဒီကောင်လေးက အထောက် အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်----
လိုချင်တဲ့ သယ်ချင်းများ အောက်က download လင့်လေး ကနေယူသွား လိုက်ပါ----
Posted by soe pae at Thursday, June 21, 2012 No comments:
Window xp တင်နည်း----
ဒီကောင်လေး ကတော့ Windows XP Installation Guide လေး ဖြစ်ပါတယ်---- windows XP တင်နည်းလေးကို မသိသေးတဲ့ သယ်ချင်းများ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်--ခင်ဗျာ။။
လိုချင်တဲ့ သယ်ချင်းများ အောက်က download လင့်လေး ကနေ ယူသွားလိုက်ပါ ------
Firefox Setup 14.0 beta 7
ဒီကောင်လေး ကတော့ Firefox Setup 14.0 beta7လေးဖြစ်ပါတယ်----- နောက်ဆုံး ထွက် update လေးပါ-----ဒီကောင်လေး မှာ မြန်မာဖောင့်ပြောင်းနည်းတို့bookmark မှတ်နည်းလေး တွေကို တော့ သယ်ချင်းများ သိနှင့်ပြီး ဖြစ်မှာပါ --- အရင် ပိုစ့်လေးတွေမှာ ဖော်ပြပေးထားတာ ရှိပါတယ်-----
လိုချင်တဲ့ သူများ အောက်က download လင့်လေး ကနေယူသွား လိုက်ပါ ခင်ဗျာ------
Posted by soe pae at Tuesday, June 19, 2012 No comments:
မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ Regedit ခော်လို့ မရဘူးဆိုရင်
ကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးတဲ့နည်းလမ်းလေး ကတော့ Regedit ကို run box ထဲက နေခော် လို့ မရတဲ့ သယ်ချင်း များ အတွက်ြ့ဖစ်ပါတယ်--- ပြန်ဖွင့်ဖို့ ကတော့ မခက်ပါဘူး။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကို အောက် မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ--------
အရင်ဆုံး Start မှ Run (win +R) ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် run box ထဲမှာ gpedit.msc ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
Posted by soe pae at Monday, June 18, 2012 1 comment:
Computer downloading ကို မြန်စေချင်ရင်
ဒီနည်းလမ်း လေးကတော့ မိမိတို့ ရဲ့ ကွန်ပျူတာ မှာ ဒေါင်းလော့ ချတဲ့ အခါ မြန်စေမှုရှိအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်---- လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ မခက်ပါဘူး ခင်ဗျာ-----
အရင်ဆုံး Start မှ Run ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးတဲ့ အခါ rum box ထဲမှာ gpedit.msc ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ Group Policy Editor ပေါ်လာပါက Computer Configuration ကို ရွေးပါ။ ပြီးလျှင် Administration Templates >> Network မှတစ်ဆင့် Qos Packet Scheduler ကို Select ပါ။ ပြီးတဲ့ အခါ Limit reservable bandwith ကို Double Clicke လုပ်ပါ။ Box တစ်ခုပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်----- အဲမှာ Enable ကို ရွေးလိုက်ပါ---- ပြီးရင် bandwith limit ကို0ပြောင်းလိုက်ပါ----- ဒါဆိုရင်တော့ computer downloading လေး အရင်က ထက်မြန်လာတာကို တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်-----
Posted by soe pae at Sunday, June 17, 20123comments:
အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် ပါတ်သတ်သော Website များ
Nokia Smartphones Guide 2011
အခ မဲ့ ဖုန်းဂိမ်းများ--
Cyberlink power director (1)
Driver Locker (1)
G-talk and G-mail (10)
Maxthon Browser (4)
Microsoft Mathemathics (2)
My theme (1)
Teaching Eng Top Website (10) (1)
U Torrent (3)
Ultra ISO (2)
Upload / Download (1)
Window Logo (1)
ကော်နက်၇ှုင်မကောင်း၇င် ကျော်ခွသုံးလို့ ၇မည့် ဆိုဒ်များ (1)
window7အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ (E-book)
အဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံပညာ(e-book)
Laptop Service Guide စာအုပ်လေး--
PC Mechanic ကွန်ပျူတာပြုပြင်နည်း စာအုပ်----
Java language specification third edition
Objective general english ( 10000 plus questions )
Adobe Photoshop cs5 အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
A ++ exam guide
PC SYSTEM ADMINISTRATION
WiFi Internet Connection Hacking စာအုပ်
LEARNING CSS ( pdf )
Facebook ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ
ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်းမိမိမေးလ်ထဲ ကိုေ၇ာက်စေချင်၇င်
ဒီကောင်လေးကတော့ Viber for pc software လေးဖြစ်ပါတယ်--- မိမိတို့ ၇ဲ့ စက်ကနေပြီးတော့ ဖုန်းကို ခော်ဆို ၇န် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်----- ဒီကောင်လေးက...
ဘ၀ရဲ့တခဏ ကြုံဆုံခဲ့ကြရတာမို့ တယောက်ကိုတယောက် အမြင်တွေဖလှယ်ကြ ကျနော်တို့တတွေ စသိခဲ့ကြတယ်...။ ဒီလိုနဲ့ တီတီတာတာတွေပြောကြ ခံစားချက်တွေ ဝေမျှ...
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ ကိုသုံးနေရင် Hangs တာမျိုး Crashes ဖြစ်တာ မျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ ...
File Folder လေးတွေကို ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ ပေါ်အောင်လုပ်နည်း
ဒီနည်းလေး ကတော့ မိမိတို့ ၇ဲ့file folders လေးတွေမှာ ပုံလေးနဲ့ ပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ နည်းလေး ဖြစ်ပါ တယ်--- လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလေး ကတော့ လွယ်...
မိမိသီချင်းနားထောင်နေတာကို gtalk မှာ ပေါ်နေစေချင်၇င်
ဒီနည်းလေးကတော့ မိမိသီချင်းနားထောင်နေတာကို Gtalk မှာ ပေါ်နေအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်------- အ၇င်ဆုံး မိမိတို့ နားထောင်မယ် သီချင်း...
လတိုင်းလတိုင်း 14 ရက်နေ့၏ထူးခြားချက်များ လတိုင်းလတိုင်းရဲ့၁၄ရက်နေ့မှာရှိတဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေပါ။မသိသေးသောသူငယ်ချင်းများ...
ဒီနည်းလမ်း လေးကတော့ မိမိတို့ ရဲ့ ကွန်ပျူတာ မှာ ဒေါင်းလော့ ချတဲ့ အခါ မြန်စေမှုရှိအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်---- လုပ်...
မိန်းကလေးများ သိထားသင့်သော အချက် (၁၀) ချက် ♥ရုပ်လှနေဖို့ မလိုပါဘူး နှလုံးသားလှနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်...။ ♥ငွေကြေးချမ်းသာဖို့ မလိုပ...
ချစ်သူ... တမြေစီခြားနေပေမယ့်.. နှလုံးသားတစုံ အတူရှိနေရင် ပြည်စုံခဲ့ပြီနော်... အတူမရှိနိုင်တဲ့ အခုလိုအချိန်တွေမှာ...
♥ယုံမလား...ချစ်သူ သစ္စာ မေတ္တာစကားတွေနဲ့ တီတီတာတာ ပြောတဲ့ ပလီပလာအထာတွေ ငါမသိခဲ့ပါဘူး အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အရိုးသားဆုံးကတော့ ငါ နင့်ကို သိပ်ချ...
ကောင်မလေး တစ်ယောက် အတွက်
တချိန်ကချစ်သူ--သို့ (၀တ္ထု) နှင့်(ကဗျာ)
♣ ငါအညာမိခဲ့တာလား ♣
♥ ကောင်မလေး--သို့ အိပ်ဖွင့်စာ ♥
♣ အဝေးကလွမ်းမည့် သင်္ကြန် ♣
"♥♥♥ မင်းအတွက် ငါရဲ့ အားနည်းချက်တွေ ထင်ပါရဲ့ ♥♥♥ "
"♥♥♥ အဖော်မဲ့တမ်းခြင်း ♥♥♥"
"♥♥♥ နင်ငါ့ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့♥♥♥"
"♥♥♥ ကျနော်နဲ့ ရောက်တက်ရာရာ အတွေးများ ♥♥♥"
" မိန်းကလေးများ သိထားသင့်သော အချက် (၁၀) ချက်"
" နင်နဲ့ဆုံနိုင်ဖို့ တခုတည်းပါ ချစ်သူ"